Inona ny adihevitra amin'ny Fihaonambe Minisitra UNWTO / ICAO momba ny fizahan-tany sy ny fitaterana an'habakabaka?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia an'i Cabo Verde » Inona ny adihevitra amin'ny Fihaonambe Minisitra UNWTO / ICAO momba ny fizahan-tany sy ny fitaterana an'habakabaka?
Mitohy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny tontonana ary fandaharana feno no kasaina hatao anio ho an'ireo solontena ao amin'ny Nosy Sai, Cabo Verde manatrika ny Fihaonamben'ny minisitra UNWTO / ICAO momba ny fizahan-tany sy ny fitaterana an'habakabaka.
Politika momba ny fitaterana an'habakabaka sy fizahan-tany: ny konferansa mifehy mba hampitomboina sy handanjalanjana ny tombotsoany
Ny fitaterana an'habakabaka sy fizahan-tany dia miankina betsaka amin'ny tsirairay ary masinina ilaina amin'ny fampiroboroboana ara-barotra sy toekarena ho an'ny firenena mandroso sy mandroso.
Na eo aza ny synergie, dia mety hisy ny fifanolanana eo amin'ny politikan'ny fiaramanidina sy ny fizahan-tany noho ny fahasahiranan'ny Etazonia amin'ny fandanjana ny tombotsoan'ny kaompaniam-pitanterany sy ny fampivoarana optimum ny indostrian'ny fizahantany. Ny politika isan-tsokajiny misaraka dia miteraka fanapahana ifotony, izay manakana ny fampandrosoana ny sehatra roa tonta. Ahoana no hanatsarantsika ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra roa, hampifanarahana ny rafitra mifehy, ary hisorohana ny politikan'ny sehatra samihafa? Ahoana no ahafahantsika mampifandanja mba hampitomboana ny tombony ankapobeny amin'ny fizahan-tany sy ny fitaterana an-habakabaka amin'ny toekarem-pirenena?
Inona ny satan'ny rafitry ny lalàna mifehy an'i Afrika ankehitriny ary inona ny fiantraikany amin'ny fizahan-tany sy ny fitaterana an-habakabaka (ny Fanambarana Lomé sy ny drafitra Action Action mifandraika amin'ny Air Transport sy ny fizahantany?
Ahoana ny fomba hahazoan'i Afrika tombontsoa sy fampiharana ny fanambarana UNWTO sy ICAO Medellín momba ny fizahan-tany sy ny fitaterana an-habakabaka ho an'ny fampandrosoana? Ahoana no ahafahan'ny Governemanta afrikanina hampiroborobo ny fiaraha-miasa sy ny fandraisana fanapahan-kevitra mifanentana amin'ireo tompon'andraikitra misahana ny fitaterana sy ny fizahan-tany ary ny minisitera hafa miadidy ireo portfolio mifandraika amin'izany, ao anatin'izany ny vola, ny drafitra ara-toekarena, ny angovo, ny tontolo iainana ary ny varotra?
Inona avy ireo fanamby atrehin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany amin'ny fanehoana ny fahalianan'ny orinasa mpizahatany amin'ny politikam-pitaterana an'habakabaka sy isam-paritra?
Fifandraisana sy fitsangatsanganana tsy misy tohiny: Fomba fanao tsara indrindra hanompoana ireo mpizahatany sy mpandeha
Sehatra toekarena mifantoka amin'ny mpanjifa ny sidina sy ny fizahan-tany.
Na dia tsy misy famaritana tokana aza ny fifandraisan'ny rivotra, dia azo jerena ho toy ny fahafahan'ny tambajotra iray mamindra ny mpandeha misy ny isa farafahakeliny, izay mahatonga ny dia fohy indrindra araka izay azo atao amin'ny fahafaham-po amin'ny mpandeha amin'ny vidiny ambany indrindra azo atao. Ny fahatsapana ny fitsangatsanganana tsy misy fangarony dia afaka manatsara ny traikefa fitetezam-paritra ankapobeny, izay mampiorina ny filan'ny fizahan-tany.
Tamin'ny nanombohana ny tsenan'ny Single Africa Air Transport Market (SAATM) tato ho ato dia mety ho zava-misy tsy ho ela ny lanitra misokatra manerana an'i Afrika, manangana ny rafitra arak'asa ilaina mba hampitomboana ny dia iraisam-pirenena atsy Afrika.
Ahoana no hanatsarantsika ny fivezivezin'ny fivezivezena amin'ny mpandeha amin'ny alàlan'ny rafitra fitaterana an-habakabaka? Ahoana no ahafahantsika mamorona fangatahana serivisy mivantana amin'ny alàlan'ny faritra afrikanina, indrindra eo amin'ny morontsiraka Atsinanana-Andrefana?
Hatraiza ny fandraisan'ny fifanarahana serivisy an'habakabaka ankehitriny (ASA) amin'ny fifandraisana ary inona ny vinan'ny fanalalahana ny fitaterana an'habakabaka? Inona no atao hoe sakan-tavoahangy sy fihenam-bidy ataon'ny fitaterana an-habakabaka? Inona ireo drafitra mifehy izay azo ampiasaina na hamboarina mba hanomezana toky ireo serivisy ilaina amin'ny rivotra any amin'ireo firenena farafaharatsiny (LDC), ireo firenena an-dalam-pandrosoana an-tanety (LLDCs) ary ireo firenena an-dàlam-pandrosoana kely (SIDS)?
Inona avy ireo fomba fanao tsara indrindra misy ary ahoana no ahafahana manitatra sy mampifanaraka izany amin'ny faritra hafa? Inona avy ireo anton-javatra mitaona ny safidin'ny kaompaniam-pitaterana ho an'ny tsena samihafa (ny lafiny iraisan'ny kolontsaina)?
Famatsiam-bola sy famatsiam-bola ho an'ny fampandrosoana: fepetra pragmatika hananganana toetr'andro fampiasam-bola mangarahara, marin-toerana ary azo vinavinaina
Ny lesoka amin'ny fotodrafitrasa amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina sy fizahan-tany dia efa olana hatry ny ela teto Afrika. Na dia eo aza ny drafitra hampandrosoana sy hanavaozana ireo fotodrafitrasa momba ny fiaramanidina, miala sasatra ny taona farany.
Mandritra izany fotoana izany, hisy ny fahaverezam-poana amin'ny famoronana asa sy ny fitomboan'ny harinkarena. Ny olana iray hafa dia ny fiparitahan'ny hetra amin'ny fizahan-tany sy ny fitaterana an-habakabaka na dia eo aza ny zava-misy fa ny indostria dia mahazo indray ny ankamaroan'ny vidin'ny fotodrafitrasa manokana amin'ny alàlan'ny fandoavana ny sarany ampiasain'ny mpampiasa fa tsy ny famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny hetra.
Ny vola azon'ny hetra dia matetika mihoatra ny tombony ara-toekarena nafoina noho ny fangatahana tsy mandeha lavitra amin'ny fivezivezena.
Hifantoka amin'ity Session ity
a) famoronana fitantanana tsara sy ahafahan'ny tontolo iainana mampiorina ny fahatokisan-tena amin'ny orinasa ary mandrisika ny fampiasam-bola, ary
b) ny fanamafisana ny ezaka fandrindrana sy fampandrosoana ho an'ny fotodrafitrasa fiaramanidina sy fizahan-tany amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny lafiny maro sy ny drafitra an-tanàn-dehibe. Inona avy ireo fanamby amin'ny tetikasam-pampandrosoana ara-bola mifandraika amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fitaterana an-habakabaka, indrindra amin'ny LDC, LLDCs, ary SIDS?
Inona ny tantara mahomby amin'ny famatsiana ara-bola ny fizahan-tany sy ny tetik'asa fitaterana an'habakabaka? Ahoana no fahitan'ny mpanjifa ny haba, ny sarany, ary ny hafa haba ary ahoana ny fiantohana ny mangarahara amin'ny hetra sy ny sarany amin'ireo mpandeha sy mpizahatany?
Fa maninona no misy ny vola voafetra amin'ny famatsiam-bola iraisampirenena sy fanampiana ho an'ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao ho an'ny tetikasan'ny fotodrafitrasa fiaramanidina sy fizahan-tany?
Fanamorana ny dia: Mandroso ny fanamorana ny visa amin'ny fanohanana ny fitomboana ara-toekarena
Ny fanamorana ny dia dia tanjona amin'ny fampitomboana ny fahombiazan'ny fomba ofisialy ny fanesorana ny sisin-tany na dia eo aza ny fahazoana sy fitandroana ny filaminana avo lenta sy ny fampiharana lalàna mahomby. Ny famelana ny mpandeha / mpizahatany hiampita ny sisintany iraisampirenena am-pilaminana sy mahomby dia mandray anjara betsaka amin'ny fanentanana ny fangatahana, fanatsarana ny fifaninanana any Etazonia, famoronana asa ary fampiroboroboana ny fahatakarana iraisampirenena.
Na eo aza ny ezaka lehibe natao tato anatin'ny folo taona lasa teo amin'ny fanamorana ny fivezivezena fizahan-tany any Afrika, dia mbola misy toerana azo ampivoarana. Ohatra, ny fizotra sy ny fandefasana visa elektronika dia mety hahatonga ny dia lavitra ho mora azo, mora ary mahomby kokoa raha tsy mihena ny filaminam-pirenena.
Ny fanjakana koa dia tokony hijery ny fitomboan'ny fiaraha-miasa amin'ny fitondrana fanamoriana ny firenena roa tonta, isam-paritra ary iraisam-pirenena. Ahoana ny fomba fampiasana teknolojia vaovao hampiasana ny dia mora, mora sy mahomby kokoa? Ahoana ny famaritana sy fampiharana politika izay manamora ny fitsangatsanganana sy fizahantany iraisam-pirenena nefa miantoka ny fiarovana sy ny fahamendrehan'ny famantarana ny mpandeha sy ny fifehezana sisintany?
Hatraiza ny fifandraisan'ny e-pasipaoro, e-visa ary antontan-taratasy hafa amin'ny fandrahonana ho an'ny filaminana? Ahoana no ahafahan'ny firenena Afrikana mianatra amin'ny fampiharana faran'izay tsara mahomby?
Nakatona ny rivotra WOW: an'arivony maro no tafahitsoka
Nicolas Chammaa ho mpitantana jeneralin'ny Vida Downtown Dubai